Startseite/Windows 10/Samee daabacaha caadiga ah gudaha Windows 10
Vangelis8. Febraayo 2016
at Windows 10 waxaad samayn kartaa daabacaha caadiga ah. Haddii aad haysato wax ka badan hal daabacaha, laakiin badiyaa kaliya isticmaal mid ka mid ah, waxaad ka dhigi kartaa daabacahaas sida daabacaha caadiga ah. Haddii aad eegto goobaha waxaad ku arki doontaa qalabyo kala duwan oo ka hooseeya Daabacayaasha, laakiin ma aha daabacayaal. Halkaas waxaad ka heli doontaa, tusaale ahaan, Microsoft ilaa PDF, Qoraaga Document Windows XPS, Fax iyo dabcan daabacahaaga rakiban. Adigoo dejinaya daabacahaaga sida daabacaha caadiga ah, waxaad isla markiiba daabici kartaa dukumentiyadaada adigoon dooranin daabacaha mar walba. Waxaan ku tusi doonaa sida loo dejiyo daabacaha caadiga ah:
Si aad u beddesho oo aad u dejiso daabacaha caadiga ah gudaha Windows 10, riix isku -darka furaha Windows + i ama guji badhanka Windows ee bidixda hoose oo sii wad goobaha
Guji bidix kale Daabacayaasha & iskaanka
Dhammaan daabacayaasha waa la soo bandhigay.
Guji daabacaha Daabacaha caadiga ah waa inay ahaataa oo guji Sida caadiga ah.
Calan printer default via guddi ay gacanta ku
Waxaad isticmaali kartaa Windows 10 Daabacaha caadiga ah sidoo kale lagu dhigay gudiga xakamaynta
Riix furaha toobiye Windows + X oo dooro Guddiga xakamaynta
Marka la soo bandhigo Astaamaha waaweyn guji qalabka iyo daabacaha.
Guji la badhanka jiirka midig ku daabacaha aad rabto inaad u dejiso sidii hore oo dooro faylka Calan sida printer default
Haddii aad rabto inaad wax daabacdo hadda iyo mustaqbalkaba, daabacaha aad rabto ayaa adeegsan doona.
Mar labaad dhaqaaji Windows 10 mitirkii hore ee korontada
Daaqadaha shaashadda Windows 10 - dib ugu celi lambarka 0
Daaqadaha Beddel cabbirka daaqadda hawsha
Uninstall Windows 10 liisanka oo u wareeji kombiyuutar kale
Beddelka xisaabiyaha Windows 10
Windows 10 qariya dhawaanahan iyo faylalka iyo inta badan la isticmaalo
Daaqadda ogaysiiska Windows 10 waxay beddeshaa muddada muujinta
Windows 10 - qalab cusub oo soo kabashada xogta u gaar ah
Muuji faylasha qarsoon Windows 10
Qari faylasha dhowaan la isticmaalay Windows 10
go'aansado Windows daaqadaha 10
Nugget wuxuu leeyahay,
Oktoobar 29, 2018 at 12:16 pm
Waxaan ka maqanahay xariiqda “U dhig sida daabacaha caadiga ah” ee Lexmark X2250
Marka anigu ma xallin karo dhibaatada
Vangelis wuxuu leeyahay,
Oktoobar 29, 2018 at 19:53 pm
Axel Lindenlaub wuxuu leeyahay,
Sebtember 10, 2016 at 10:02 pm
Tilmaamaha ku saabsan sida daabacaha caadiga ah loogu rakibay W 10 sax ma aha. In kasta oo la dejiyay, haddana shaqada waxaa mar walba la wareega daabacaha markii ugu dambeysay la isticmaalay. Tani waa wax laga xumaado maxaa yeelay waxaan u isticmaalaa daabacaadda laser b / w si caadi ah iyo khad / midab kaliya si gaar ah.
Sebtember 11, 2016 at 07:59 pm
fiiri Windows 10 dejinta:
Under Printers & Scanners at Windows ha maamusho daabacayaasha caadiga ah daaran yahay Haddii ay sidaas tahay, demi ikhtiyaarka.
Wax walba waa inay hadda shaqeeyaan. Haddii kale, la xiriir mar kale.